यस्तो छ दुई महिनादेखि बेपत्ता रहेका उद्योगपति ज्याक माको कहानी ! « Lokpath
२०७७, २२ पुष बुधबार १४:५६
यस्तो छ दुई महिनादेखि बेपत्ता रहेका उद्योगपति ज्याक माको कहानी !
प्रकाशित मिति : २०७७, २२ पुष बुधबार १४:५६
काठमाडौं । अहिले चीनका उद्योगपति ज्याक मा बेपत्ता भएको बताइएको छ । उनी अचानक आफ्नो ट्यालेनट शोको फाइनल एपिसोडमा पनि देखिएनन् ।
चीन सरकारविरुद्ध आवाज उठाएपछि उन िचनिको नजरबन्दमा रहेको केहि सञचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । उनको संघर्षले भरिएको कहानी चाखलाग्दो छ ।
आज ज्याक माको नाम संसारका सफल व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ । फोर्ब्सको सूचीमा पनि उनी पावरफुल व्यक्तिको रुपमा रहेका छन् । उनको जनम १५ अक्टुबर १९६४ मा चीनको हमजो शहरमा भएको थियो ।
उनलाई सानोमा पढ्न त्यति रुची थिएन । २० अर्ब डलर भन्दा धेरै निजी सम्पत्तीका मालिक ज्याक माको नाम उनलाई साथीले दिएका हुन् । उनी टूरीस्ट गाइड थिए । उनका टूरीस्टलाई उनको चाइनिज नाम अनौठो लाग्थ्यो र कठिन पनि ।
त्यसैले उनलाई ज्याक भनेर बोलाउन थालियो । उनी ४ कक्षामा २ पटक र आठ कक्षामा चार पटक फेल भएका थिए । उनले हावर्ड यूनिभर्सिटीमा १० पटक आवेदन दिए तर नाम निस्किएन ।
अन्तिममा उनले हमजो यूनिभर्सिटीबाट स्नातक गरे । उनी अंग्रेजी सिक्नको लागि टूरिसट गाइड बनेका थिए । उन िटूरिस्टसँग फीको स्थानमा अंग्रेजी सिक्थे । त्यसपछि अन्त्यमा उनी अंग्रेजीमा प्रखर भए ।
उनले आफ्नो पढाईअनुसार जागिर खोज, तर कतै पाएनन् । उनलाई ३० कम्पनीले रिजेक्ट गर्यो । त्यसपछि मासिक ८०० रुपैयाँ लिएर उनले टिचरको काम गरे । त्यसै क्रममा उनलाई केहि पटक अमेरिका जाने अवसर प्राप्त भयो ।
त्यहाँ उनले पहिलो पटक इन्टरनेटसँग जोडिने अवसर पाए । त्यहाँ उनले पहिलो पटक चाइना पेज वेबसाइट बनाए जो फण्डका कारण बन्द भयो । त्यसपछि अलीबाबाको आइडीया पनि नाकाम रह्यो ।
कम्पनीको अवस्था नाजुक रह्यो तर पनि उनले हार मानेनन् । फेरि २०१३ मा १० लाख करोड आईपीओकोसाथ अलीबाबा अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ वाला कम्पनी बन्यो । त्यो बेलासम्म उनको सम्पत्ती २३ अर्ब डलर सम्पत्ती थियो ।